ONN LIVE: QOPHII GAADDISA DHUGAA: Sirna Simannaa ABO Lixa Shaggar Magaalaa Baakkootti Gaggeeffamerratti Miseensi Shanee Gumii-Gumii Sabaa ABO – Kichuu
HomeAfaan OromooTVONN LIVE: QOPHII GAADDISA DHUGAA: Sirna Simannaa ABO Lixa Shaggar Magaalaa Baakkootti Gaggeeffamerratti Miseensi Shanee Gumii-Gumii Sabaa ABO
ONN LIVE: QOPHII GAADDISA DHUGAA: Sirna Simannaa ABO Lixa Shaggar Magaalaa Baakkootti Gaggeeffamerratti Miseensi Shanee Gumii-Gumii Sabaa ABO
ONN LIVE: QOPHII GAADDISA DHUGAA: Sirna Simannaa ABO Lixa Shaggar Magaalaa Baakkootti Gaggeeffamerratti Miseensi Shanee Gumii-Gumii Sabaa ABO J/Saamiyaa Usmaan Haasawa Taasisaniin Hiree Ofii Kan Murteeffatu Matuma Isaa Ummata Oromooti Jedhan.
Hoorroo Magaala Fincaa Hiriira Deegersa WBO Guyyaa haar’a. WBO hin hiikkachu akka hin qabne dhamatanirruu.
OPDOn “ ABO sossobeen biyyaan gayeen achitti hiikkachiiseen kan dide achitti itti marseen agarsiisaa “ yaada jedhu garaatti yaaddee waamicha gootee dhaabnis waan haasa’u waliin haasa’ee yeroo galu OPDOn
1. siyaasa daldaltee bu’aa guddaa irraa kan buufatte,
2. ABO kan gowwomsite
3. WBO akka salphaatti of harka kan galchite
4. Erga inni galee immoo waadaa cabsuu WBO maqaa balleessuu,
5. ABO hiikkachiisuuf social Midea irratti kan isaan bobbaasan Addisuu, Taayyee fi Milkeessaan humna itti dhabnaan
6. Kamaal , Abbabaa fi Hayiluu haaloo isaanii akka ba’aniif WBO fi ABO akkasumas Uummata Oromoo guuturratti bobbaasuun OPDO tti karaa fakkaateera.
Haata’uutii OPDO dhaaba hin bayyanannee fi laafaa hin kaanee kana miti Qeerroon Wayyaanee warra OPDO har’aa kana akka maxinootti dhodhoobdee tolchiteyyuu kuunnoo qarsaatti galchiteetu OPDO dhaan aangoo biraan geessisteetti.
ABO immoo carraa bu’aa FXG fideen hooggaani isaa iyyatti yeroo deebi’u gowwomee, ykn dirqamee otuu hin taane gafaatamee waliigalameetu gale kun immoo ABO waan gaabbisiisu hin qabu haata’uutii bu’aa guddaa itti argateera saba isaa waliin wal arguu fi waliin hojjechuuf carraa guddaa isaaf baneyyu kun immoo akka obboo koo Abiishee gaabbiin quba isaan nyaachisa. Bishaan darbe hin waraabani egaa, aannantu aannanitti makame jechuun ABO tu saba isaa Oromootti makame akkatti secaatee, hungulaaltee adda baaftu hin qabdu ABO seelii dhiiga ilmaan Oromoo keessaa owwaata. ABOn Saba bal’aa Uummata Oromooti yeroof yaala malee MOOTUMMAAN KAMIYYUU UUMMATA INJIFATEE HIN BEEKU iddoo tokko gayee fi dhaabbata, saba guutummaatti fincilee ka’e bulchuun ulfaataadha. Mootummaan Abiyyii fi Lammaa kana hubachuu dadhabe.
Har’a itti fakkaateera Abiyyi fi Lammaa jedhee sabni maqaa isaan dhoofnaan sabaa ol of godhaniiru miti garuu sabni jara kana kan inni iddoo kennuufii haga ABO tti hin buunettidha.
Jaal Daawud Ibsaa hoogganni kaayyoo dhugaa gaafa dirree masqalaatti haasa’aa godhe dubbateera “ nuti Qabsoo kana itti ciichinee asiin geenyee fidnee kunoo isin biraan geenyeerra kana booda eeggachuun, tikfachuun waliin hojjechuun kan keessani saba nanaa” jedheera sabnis kana fudhateetu wajjiniin ta’uusaa magaalaa adda addaa irratti tumsa isaa agarsiisaa jira. Garuu OPDO kana otuu argituu har’as humnaanan bita jettee yaaduun ishee seenaa bara dheeraa otoo hin taane seenaa dheengadda gooftoliin isaanii ta’an irraa barachuu dadhabuu agarsiisa. Kun immoo kufaatii isaanii saffisiisa.
ABO otuma qawwee hiikkateeyyuu saba akka lubbuu isaatti isa jaallatu qaba harka duwwaayyuu saba isaa qabatee mi’uu danda’a. Garuu diinni ( halagaan) hidhatee golee hundaan saba mootummaa dhabetti seenee otuu ajjeesaa jiru kana gochuu hin danda’u. Wareegama kan jaallatu hin jiru hunduu jiraaatee aduu bilisummaa otuu argee ni jaallata garuu roorroon Yoo hammaate gatii kaleessa ba’e hin caalu kan kaffalamu. Yeroof yaala malee mootummaan kamiyyuu Uummata hin mo’u,